Go on တစ်လုံး.. ဘယ်လိုသုံးလဲ မှတ်ပါဦး ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 8:44 PM | No မှတ်ချက် | ‎Win Naing Oo‎ to အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ဝင်စားသူများ
Go on (1) to continue ဆက်လုပ်သည် Please go on with what you are doing. ကျေးဇူးပြုပြီး ခင်ဗျား လုပ်လက်စကို ဆက်လုပ်ပါ ။ . We really can't go on living like this. ( go on + Ving) ကျနော်တို့ တကယ်ပဲ ဒီအတိုင်း ဆက်ပြီး မနေထိုင်နိုင်တော့ပါဘူး
. If you go on like this, you won't have any friends left at all. ခင်ဗျားဒီအတိုင်းဆက်ပြီး ပြုမူနေလျှင် ခင်ဗျားမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မျှ ကျန်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ........................................................... Go on (2) to the next thing .. နောက်တစ်ဆင့်သို့ရောက်သည် ၊ ဆက်လက်သည် . What proportion of people who are HIV-positive go on to develop AIDS? HIV ပိုးရှိတဲ့သူတွေထဲက ဘယ်အချိုးအစားလောက်ဟာ နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ AIDS ကို ဆက်လက်ကူးပြောင်းပါသလဲ …............................................................... Go on (3) operate လုပ်ဆောင်သည် .. The spotlights go on automatically when an intruder is detected in the garden. မီးမောင်းကြီးတွေက ပန်းခြံထဲကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူတစ်ယောက် ၀င်ရောက်လာတာနဲ့ အလိုအလျှောက် အလုပ်လုပ်ပါတယ်( မီးထိုးပြီးပြမယ်) ….................................................... Go on (4) talk again ပြတ်နေတဲ့စကား ဆက်ပြောတယ် .. He paused to haveasip of coffee and then went on with her. သူက ကော်ဖီတစ်ငုံသောက်ဖို့ ခဏစကားဖြတ်ပါတယ် နောက်တော့ သူမနဲ့ စကားဆက်ပြောပါတယ် ........................................................... Go on (5) to encourage someone to say or do something: ဆက်ဆွဲလိုက်ပါ ၊ လုပ်ထည့်လိုက်ပါ .. Go on, what happened next? ချကွာ ..နောက်ထပ်ဘာများဖြစ်ဦးမလဲ ….............................................. Go on (6) talkalot အများကြီးပြောသည် .. He WENT ON AND ON until I finally interrupted him and told him I had to go. နောက်ဆုံး ကျနော်သွားတော့မယ်လို့ သူ့စကား ကြားဖြတ်ပြီး ပြောသည်အထိ သူက စကားအများကြီးကို ဆက်..ဆက်ပြီး ပြောပါတယ် …............................................... Go on (7) Please do လုပ်ပါ (လုပ်ဖို့အားပေး) .. Go on, have another drink. လုပ်ပါ ထပ်သောက်ပါဦး ….............................................. Go on (8) agree သဘောတူသည် .. "Are you sure you don't want another slice of cake?" "Oh go on then, but justasmall one." ခင်ဗျားနောက်ကိတ်မုန့်တစ်ချပ် မလိုတော့တာ သေချာတယ်နော် အဲလိုဆိုလည်း လုပ်ပါ .ပေးပါ ၊ ဒါပေမယ့် သေးသေးလေးတစ်ချပ်ပဲနော် …................................................... Go on (9) to pass time အချိန်ကုန်သွားသည် ။ အချိန်ရွေ့လျှားသွားသည် .. As the evening went on, it became clear that we should never have agreed to see each other again.
ညနေခင်းလေးက ကုန်ဆုံးသွားသလိုပါပဲ .. ကျနော်တို့ နောက်တစ်ကြိမ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တွေ့ဆုံကြဖို့ ဘယ်တော့မှ သဘောမတူခဲ့ကြသင့်ဘူးဆိုတာ ရှင်းလင်းထင်ရှားလာပါတယ် .. The free dictionary မှ Eng to Eng ဖွင့်ဆိုချက်များ နမူနာများကို ဘာသာပြန်ဆိုတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် .. Phrasal verb စာအုပ်လေးတွေ ၀ယ်ဖတ်ကြစေချင်ပါတယ် .. မေတ္တာဖြင့် heart emoticon . (Upgrade English)